Imisa qaxooti ah ayaa Sweden soo galaya sanadkaan? - iftineducation.com
aadan21 / July 25, 2016
iftineducation.com – Iyadoo sanadkii hore ay Sweden iska dhiibeen dad kor u dhaafaya 160.000 qof oo qaxooti ah, ayaa sanadkaan la filayay in ay ka badan boqolkun iska dhiibi doonaan wadanka balse xaalada ayaa si weyn isku badashay, ka dib markii ay Sweden xuduudaha xiratay isla markaan wadamada kale ee ilaa Greece ay xireen xuduudahooda.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa hadda dib ugu noqotay tirada qaxootiga ay filayaan in ay wadanka soo galaan sanadkaan, iyadoo hadda la filayo 30.000 ilaa 50.000 qof in ay wadanka soo galaan sanadkaan. Waxay sheegeen in sharciyada cusub ee dowladu ay ku adkaysay arimaha socdaalka ay saameyn yeesheen.
Guud ahaan waxaa aad hoos ugu dhacay tirada qaxootiga soo galaya qaarada Yurub, ka dib heshiiskii ay la saxiixdeen Turkey. Sanadkii hore ayaa waxaa dhinaca Turkey ka soo galay qaxooti kor u dhaafaya 1 milyan oo qof balse sandkaan ayaa la filayaa 250.000 qof oo keliya.
Warbixin muhiim galmada dhareerka ka keenta gabdhaha wa sadax nuuc ha aqrin hadad kacsi fududahay
Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo la wareegtay maamulka xarumihii Nile Academy